Business Round Up (12 November 2021) – Afranaxtv Network
Business Round Up (12 November 2021)
IPO की आंधी में किसकी चांदी? सबसे ज्यादा IPO कौन से हुए सब्सक्राइब ! किन स्टॉक्स में रहेगा फोकस ?
This should be an embarrassment to the administration: Hoffmann
Biden 'transitory' inflation claim in question amid continual price increases
పోస్టాఫీసు ఫ్రాంచైజీ మీరూ తీసుకోవచ్చు..| Low Budget Best Business Idea | ABN3Mins
– တရုတ်နိုင်ငံက သူ့ရဲ့ BRI စီမံကိန်းကို စစ်ကောင်စီရဲ့ အာမခံချက်နဲ့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေ။
– တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်း Menga ဆိပ်ကမ်းကို ယာယီ ပိတ်ထား။
– ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်အချို့ကို သွင်းကုန် လိုင်စင်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မယ်။
– ကြက်သွန်နီဈေးနှုန်းတွေဟာ ၃ ပုံ ၁ ပုံလောက်အထိ ကျဆင်းနေ။
– ကုလားပဲ လက်ကျန်များနေပြီး ဈေးနှုန်းကျဆင်း။